Media – zlkontempo
Poetry Gives the Reader Moral Strength
ဇေယျာလင်း သို့မဟုတ် ဘာသာဗေဒအခြေပြု ကဗျာ ဖန်တီးသူ
ကဗျာဆရာ ဇေယျာလင်းကို ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားပြီး ငယ်စဉ်ကပင် ဆံပင်အရှည်ကြီး ထားရှိရာ ထိုဆံပင်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းလည်းရှိသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ် စာသင်ကြားစဉ်က သူ့အထက်အရာရှိက ဆံပင်ညှပ်ရန် အမိန့်ပေးရာ …
burma.irrawaddy.com ပါ အင်တာဗျူး မြန်မာဘာသာပြန်မှာ အမှားအချို့ပါရှိပါတယ်။
၁။ ဆံပင်ကိစ္စက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမဟုတ်ပါ။ဟင်္သာတကောလိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၄ ကပါ။ ကျွန်တော့်ဆံပင်ကိုအာဏာနဲ့ လာလာနင်းနေလို့ အာဏာဝေစားမျှစား ကောလိပ်ကရော တက္ကသိုလ်ကပါ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော် နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (မူရင်းအင်္ဂလိပ်မှာကို မှားတာပါ။ စာအုပ်ရပြီးမှ ပီတာ့ကိုပြောတော့ သူလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ)။
၂။ ဘာသာဗေဒအခြေပြုကဗျာ မဟုတ်ပါ။
ဘာသာစကား ကဗျာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အရှေ့ဥရောပကဗျာဆရာတွေလိုပဲ မဟုတ်ပါ။
– Zeyar Lynn.
Granta 138: Two Poems – Zeyar Lynn
Two new poems by Zeyar Lynn, translated from the Burmese by Ko Ko Thett.
Zeyar Lynn reading his poems on Close Listening (Charles Bernstein)
Zeyar Lynn’s second show on Close Listening, in which he reads his poems, in both Burmese and English, from Bones Will Crow […]
Podcast with Charles Bernstein.
Poetry International Web: BURMA (MYANMAR) – Zeyar Lynn
[…] As of 2018 Zeyar Lynn has taken, what I like to call oxymoronically,alanguage-lyric turn, where his poems display deep trouble both with language and life.